Fifanentanana: Torohevitra dimy tsy mety diso | Sakafo Nutri
Fomba fampitomboana ny malefaka amin'ny vatana
Fantatrao ve fa ny manovaova dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampihetseham-batanao? Tsy vitan'ny hoe tsy afaka manatratra ny tongotrao amin'ny tananao ianao fa bebe kokoa. Ny famafazana kofehy hozatra dia mahatonga anao ho mpanao fanatanjahan-tena tsara kokoa, sady misoroka ny ratra.
Ary tsy tokony hohadinointsika fa manampy izany tazomy ny fihetsika marina sy ny fihetsika araka ny fandehan'ny taona. Ity fahazarana isan'andro manaraka ity dia hanampy anao hampitombo ny fahafaha-miovaova:
Manomboka amin'ny maraina ny zavatra voalohany: Ny fitatra amin'ny maraina dia hampiditra anao amin'ny angovo ary hampitombo ny fahalalahanao. Tsarovy fa satria mbola mangatsiaka ny hozatra dia mety ny manao fihenam-bidy malefaka izay manery ny vatanao mihoatra ny zavatra mahafinaritra anao. Azonao atao izany na dia eo am-pandriana aza.
Aza mandingana ny cooldown: Ny fanitarana aorian'ny fiofanana mba hanampiana ny vatana hifindra avy amin'ny hetsika mankany amin'ny tsy fahavitrihana dia zava-dehibe, indrindra raha mpihazakazaka na bisikileta ianao. Ary ireo fanatanjahan-tena ireo dia mety hiteraka fatotra hozatra. Minitra vitsy dia ampy hamelombelona ny vatanao ary hiovaova.
Mampiasà roulant foam: Ity fitaovana mora vidy sy mora ampiasaina ity dia mampihena ny hozatra ary manatsara ny fahalalahan'ny olona. Ampiasao tsy tapaka izy io, manasongadina ireo faritra amin'ny vatanao izay miteraka olana eo amin'ny tery aorian'ny fampiofanana na mandany ora maro mipetraka eo anoloan'ny birao.
Diniho ny yoga sy pilates: Na dia azo atao aza izany dia tsy ilaina ny manova ny fanazaran-tena fanaonao mba hampiharana ireo fifehezana ireo, fa azonao atao ny mampiditra azy ireo ho famenony. Raha tsy miovaova ianao dia hiaina fiovana lehibe eo amin'ny malefaka ny hozatrao sy ny heriny.
Faritra kendrena kendrena: Mandany fotoana fanampiny amin'ny faritra tena henjana aorian'ny famelarana ny vatana amin'ny ankapobeny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » fahasalamana » Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena » Fomba fampitomboana ny malefaka amin'ny vatana
Hadisoana rehefa mahandro tratra akoho